Ifama yaseMalibu, umoya othuleyo kunye nosapho.
Barreiras-BA, Bahia, Brazil
Igumbi elisetyenziswa nangabanye abantu e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguKelson
I-Pousada e Restaurantes iMalibu yindawo yokuhlala enobubele bosapho, ebekwe elunxwemeni lwaseRio de Ondas, iikhilomitha ezingama-07 ukusuka eBarreiras-BA. Inika indawo evumela ukuba wena kunye nosapho lwakho niphumle kwaye nikonwabele ukuhlamba emanzini aseRio de Ondas. indalo entle, ekuvumela ukuba uvuke kwisandi samanzi kunye neentaka zeentaka, ukonwabela ukutya okugqwesileyo. ixabiso lentengiso kunye negumbi elinye kunye noluntu.
I-Malibu yindawo ehlala kwiindonga zeRio de Ondas, apho izilwanyana zasendle zeentlobo ezahlukeneyo zihlala zikhona kwindalo, njenge: chameleons, iintaka; joão de dongwe, uyabandezeleka, ingcungcu, iinkawu, intlanzi:icurimata, i-pacu kunye ne-dourado kunye nezinye izilwanyana. Uziva uyinxalenye yeNdalo. Intsapho kunye nomoya woxolo. Sinokhetho lwegumbi ekwabelwana ngalo (ixabiso lokuthengisa), okanye sinayo i-Chalet, indawo yonke (ixabiso eliza kuvunyelwana ngalo nomninimzi).
iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
Kwingingqi yethu sinespa, iihotele, iindawo zokutyela, iinkampani zezithuthi, izikhululo zegesi, isikhululo seenqwelomoya sikumgama oziikhilomitha ezi-2, kwaye isixeko saseBarreiras-BA sikumgama oziikhilomitha ezisi-7.
Umbuki zindwendwe ngu- Kelson
Amagumbi aya kwahlulwa phakathi kweendwendwe eziza kulala kwiibhedi ezi-2. Umamkeli uhlala kwindawo.
IiChalets zinokubhukishwa ngokupheleleyo, kodwa kuphela ngolungiselelo kunye nomamkeli.